पाठकको पुर्पुरो : कार्य सिद्धि होस् – २०७६ मंसिर ०५ गते बिहीबार – Rastriya Yuvajagaran News
५ मंसिर २०७६, बिहीबार १४:२३06
वि.सं. २०७६ मंसिर ५ गते, बिहीबार (२०१९ नाेबेम्वर २१, मार्गशिर्षकृष्ण नवमी
मेषकेही सुधारको संकेत देखिएता पनि नोकरीमा भने भनाई खानु पर्नेछ । असन्तुष्टिपनाले छाड्ने छैन । नयाँ आर्थिक कारोवारले समस्या मात्र थपिनेछ । प्रतिक्षित नतिजामा सन्तोष मिल्ने छैन । हचुवाको भरमा निर्णय लिँदा पछुताउनु पर्नेछ ।
बृषआफन्तजनहरु टाढिने छन् । विवादित कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्दा दिक्क लाग्नेछ । गोपनीयता बाहिरीँदा विपक्षीले स्थान पाउने छन् । आफन्तजनसँग नै विवाद पर्नेछ । ढिला सुस्तिका कारण विशेष अवसर फुत्कनेछ । सतर्क रहेर कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मिथुनदिन शुभ रहनेछ । सुख सुविस्ताका साधनहरु जुट्ने छन् । शुभ खबर सुन्न पाइनेछ । व्यापार व्यवसायमा आयदर बढ्नेछ । कलात्मक कार्यमा मन रमाउनेछ । मित्रजनको साथ सहयोगले गर्दा नयाँ कार्यको आरम्भ हुनेछ । खुसीयाली छाउनेछ ।
कर्कटकठोर बोलि व्यवहारका कारण बन्धुवान्धवसँगको सम्बन्ध विग्रनेछ । चिन्ता, पीरले सताउनेछ । हतारको निर्णयले समस्यामा परिनेछ । विशेष गरेर पूर्व तयारी गरी कुटुम्बपक्षको साथ सहयोगले अघि बढ्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिने समय रहेको छ ।
सिंहमनोरञ्जनात्मक समारोहमा सहभागी हुने मौका मिल्नेछ । मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ । शत्रु पनि मेलमिलापमा आउँदा कार्य गर्न सहज हुनेछ । कला र गलाको प्रशंसा हुनेछ । उत्साह उमंग छाउने छ ।
कन्याजिद्दि गर्ने बानिले गर्दा समस्या मात्र थपिनेछ । सामान्य कार्यमा नै भुल्नाले महत्वपूर्ण कार्य ओझेलमा पर्नेछ । स्वास्थ्य समस्या यथावत् नै रहनेछ । आम्दानिको तुलनामा खर्चभार बढ्नाले आर्थिक तालमेल मिलाउन गाह्रो पर्नेछ ।
तुलाआर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नयाँ लगानिको अवसर मिल्नेछ । आकस्मिक रमाइलो यात्राको अवसर मिल्नेछ । पारिवारिक जमघटले मन फुरुंग बन्नेछ । नयाँ ठाउँको भ्रमणले नयाँ ज्ञान मिल्नेछ । बन्दव्यापारबाट सुखसन्तोष मिल्ने देखिन्छ ।
वृश्चिकपिता र गुरुजनको सहयोगले अघि बढ्दा कार्यहरु सहज तवरले बन्ने छन् । सामाजिक कार्यमा प्रशंसा मिल्नेछ । नयाँ जिम्मेवारी बढ्नेछ । व्यक्तित्व विकासको समय रहेकोे छ । बोलिको कदर हुनेछ । नयाँ नयाँ प्रस्तावहरु आउनेछन् ।
धनुअवसर हुँदाहुँदै पनि पछि परिनेछ । मिहिनेत अनुसारको प्रतिफल नमिल्दा काम गर्ने जाँगर घट्नेछ । नोकरीमा अपजस एवं आलोचित भइनेछ । परोपकारी कार्यमा भने अग्रसरता रहनेछ । धार्मिक यात्रा हुनेछ । आज ठूलो लगानि उचित देखिन्न ।
मकरशारीरिक आलस्यताले कार्य गर्न सकिने छैन । आफ्नै निर्णयले आँफैलाई समस्यामा पार्नेछ । व्यवसायमा मन्दीपन रहनेछ । दैनिक गर्दै आएका कार्यमा समेत विघ्नबाधा आउनेछ । शोकप्रद खबर सुन्नु पर्नेछ । गलत व्यक्तिको परिबन्दमा परिनेछ ।
कुम्भशैक्षिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रमा अग्रस्थान मिल्नेछ । सोचे अनुरुपका काम कार्य पूरा हुँदा हर्ष बढ्नेछ । विपरीत लिंगीको साथ सहयोगले कार्य बन्नेछ । काम प्रतिको लगनशिलता बढेर जानेछ । मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ ।
मीनसामान्य समस्या एवं झन्झट आइलागेता पनि बुद्धिमता ढंगले अघि बढ्दा जीत हुनेछ । घरायसी सरसामान जोडिनेछ । रोकिएको वित्तिय कारोवार सुचारु हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आयदर बढ्नेछ । श्रमको सही मूल्यांकन मिल्नेछ ।
Related tags : Horoscope-2076 Munshir 05
यो खबर हेर्नुहोला । : "पाठकको पुर्पुरो : कार्य सिद्धि होस् – २०७६ मंसिर ०५ गते बिहीबार". यहाँ लिन्क छ : https://yuvajagaran.net/?p=20965. Thank you